Qoor-Qoor oo 10 Cisho gudahood Galmudug ku aadi doona | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor oo 10 Cisho gudahood Galmudug ku aadi doona
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Qoor-Qoor toban maalin gudaheed ayuu ku aadi doonaa Safar Maxlal oo kale ah magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Qoor-Qoor waxuu Dhuusamareeb ka duuley 02/11/2020, shalay waxaa u buuxsantey 30 Cisho oo uu ka maqan yahay deegaanada maamulka Galmudug. waxa uu qorsheynayaa in uu ku aado safar gaaban caasimadda si loo tirtiro 30ka cisho.
Qoor-Qoor ayaa safar aan ujeedkiisa iyo mira-dhalkiisaba la shaacin ku tagay waddanka Turkiga halkaasoo sida la aaminsan yahay uu u tagay Nasiino, intaa kaddibna waxa uu sal dhigtay magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ka wado shirar gaar-gaar ah oo uu la leeyahay Fahad Yaasiin iyo siyaasiyiinta kasoo jeedda Galmudug. Waxa uu dhawaan ku dhawaaqay in uu u kala dab-qaadi doono Dowladda iyo Golaha Musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya.
Dastuurka Galmudug waxaa uu qabaa in Madaxwaynuhu deegaanka ka maqnaan karo 40-maalmood, hadii waqtigu intaa dhaafana waxa uu weyn doonaa kursiga Madaxweynaha Galmudug. Inkastoo uu aaminsan yahay inta Fahad Yaasiin uu yahay Geed-fadhiga koowaad ee DF uu sii joogi doono haddii uu sharci jabo iyo haddii kaleba.
Madaxweynaha maalintii uu ka dhoofay magaalada Dhuusamareeb waxaa diyaaraddii uu saarnaa lagu riday dhowr gantaal oo ay kusoo rideen kooxda Al-Shabaab oo dooneysay in ay khaarajiyaan Madaxweynaha iyo wafdiga la socday oo muddo 20 daqiiqo wax ka yar hawada ku jiray.
Qoor-Qoor intii uu ka maqnaa Dhuusamareeb waxaa dib uga qarxay deegaanada Galmudug dagaal beeleedyo u dhaxeeya qabaa'ilada Galmudug, waxaa soo xoogeystay weerarada kooxda Al-Shabaab oo gaaray in ay kala jaraan isku socodka mas'uuliyiinta dowladda iyo shacabka inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Guriceel.
Intii uu safarka kaga soo maqan waxaa la hor geeyay Baarlamanka Galmudug mooshin xilka looga tuurayo Madaxweyne Qoor-Qoor.